Dugsigga Tababaradda Ciidamadda ee Xorgoble ee Qardho oo uu ka socdo tababaro iyo Tayaynta ciidanka
October 26, 2020 - Written by Editor
Qardho:-Dugsigga Tababaradda Ciidamadda ee Xorgoble ee magalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar ayaa waxaa si habsami leh ugga socda Qorshaha dib-u-habaynta Ciidamadda Puntland iyo tayayntooda. Ciidamada lagu siinayo tababarka Xorgoble ee magalada Qardho ayaa waxay ka kala tirsan yihiin qaybaha kale duwan ee ciidanka waxan la siiyaa tababaro kala nooc ah.
Cutubyo Katirsan Ciidamada madaxtooyooyinka Puntland ee magaalooyinka iyo kuwa loogu tala galay howl gala gaar ah ayaa maanta soo bandhigay qaar k amida casharadii la baray.Ciidamadaan oo tababarkoodu yahay mid soo gabagaboobey waxay in mud ah tababaro kale duwan ku qaadanayeen Dugsiga tababarka ciidanka ee Xorgoble ee magaalada Qardho.
Dugsigga Tababaradda Ciidamadda ee Xorgoble ee magalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar ayaa saaka waxaa booqday qaar ka mid ah saxaafada ka howl gasha deegaanada Puntland waxaan ay ka diyaariyeen warbixin kooban iyagoona ciidanka la galay safar gaaban oo ku saabsan dhinacooda tababarka Ciidanka.
Hoos ka Daawo Dugsigga Tababaradda Ciidamadda ee Xorgoble ee qardho oo uu ka socdo tababaro iyo Tayaynta ciidanka